वाईडबडी काण्डको 'लुट' बारे बसन्तपुर डबलीमा सार्वजनिक सुनवाई | Citizen Post News
वाईडबडी काण्डको 'लुट' बारे बसन्तपुर डबलीमा सार्वजनिक सुनवाई
२०७६ जेष्ठ ९ गते १९:४२
काठमाडौं । ‘नेपालका लागि नेपाली’ ले नेपाल वायुसेवा निगमको हाई फ्लाई–एक्स आईरल्याण्ड लिमिटेडबाट दुई वटा एयरवस ए ३३०-२०० खरिद गर्ने क्रममा भएको भ्रष्टाचार बारे सार्वजनिक सुनवाई गर्ने भएको छ । सुनवाई यही जेठ ११ गते दिउँसो १२ बजे काठमाडौंको वसन्तपुर डवलीमा हुने आयोजकले जनाएको छ ।
वाईडबडी भ्रष्टाचार छानबिनका लागि नागरिक आयोगले बिहिबार रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै त्यस्तो जानकारी गराएको हो । कार्यक्रममा अभियानका अभियन्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले उक्त सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा आम-नागरिक, विषयका विज्ञ र सम्पूर्ण पत्रकारहरुलाई सहभागी हुन आग्रह गरे । अभियानद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘उक्त वाईडबडी खरिदमा भएको भ्रष्टाचारका विषयमा जानकारी राख्ने आमनागरिकहरुले आफूलाई जानकारी भएको विषय र धारणा राखिदिन हुन अनुरोध गरेका छौं ।’
त्यस्तै अभियानले विषयविज्ञले भ्रष्टाचारको विवरणसहित सार्वजनिक गरिदिन र सर्वसाधरणलाई सुचित गरिदिनुको साथै आमपत्रकारले पनि सो भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा लेखिएका दस्तावेज, लेखहरुलाई समेत लिई उक्त सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा सहभागी भई आ-आफ्नो धारणा राखिदिनका लागि आव्हान गरेको छ । कार्यक्रममा वाईडबडी भ्रष्टाचार छानबिनका लागि नागरिक आयोगका संयोजक सुकदेव भट्टराईले वाईडबडी भ्रष्टाचारबारे संसदीय समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गरे ।
उनले भने,‘प्रधानमन्त्रीलाई यो काण्डमा मन्त्री संलग्न छैनन् भन्ने अधिकार छैन् ।’ त्यस्तै, कार्यक्रममा आयोगका सदस्य डा. ठाकुरमोहन श्रेष्ठले वाईडबडी भ्रष्टाचार काण्डमा आफूहरुले सत्यतथ्य बाहिर ल्याएरै छोड्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने,‘हामीले धेरै अनुसन्धान गरिसकेका छौं । सबैखाले दस्तावेजहरुको अध्ययन गरेका छौं । विशेज्ञहरुको पनि राय लिएका छौं । चाँडै नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेछौं ।’
गहन अध्ययन र विश्लेषणका आधारमा प्रतिवेदन बाहिर ल्याउन लागेको उनको दाबी छ । नेपालका लागि नेपाली अभियानका अभियन्ता बालकृष्ण न्यौपानेले वाईडबडी भ्रष्टाचारबारे जनतालाई सत्य कुरा थाहा दिलाउने बताए । कार्यक्रममा आयोगकी सदस्य सचिव रोशा श्रेष्ठले वाईडबडी भ्रष्टाचारबारे चौतर्फी रुपमा आवाज उठाउन आग्रह गरिन् । उनले भनिन्,‘सरकारले आम नागरिकको आँखामा छारो हाल्ने काम गरेको छ ।’